ခံစားချက်တွေကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ ဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပြီး တော်လှန်သင့်ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း – Cele Snap
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အဆိုတော် ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ တစ်သားတည်းရပ်တည်ပြီး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေသတင်းအချက်အလက်တွေကိုလည်း အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသိရှိနိုင်အောင်လည်း သူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှတစ်ဆင့် ဝေမျှ ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ညစဉ် ၈ နာရီရောက်တိုင်းလည်း သူမရဲ့အိမ်ရှေ့တွင် သံဗုံးတီးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုလည်း လုပ်ဆောင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင် နာရီပိုင်းလောက်ကလည်း ဖြူဖြူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာတွင် ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းမတင်ဘဲဦးနှောက်နဲ့စဉ်းစားပြီးရှေ့ဆက်တော်လှန်သင့်ကြောင်း သုံးသပ်ပြောပြလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကအမှတ်ပေးဝန်းရံပေးနေတဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို အပျက်စီးမခံသင့်ကြောင်းကိုလည်း အခုလို ရှင်းပြပေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ”
သတ်တယ်။ဘာလို့သတ်တာလဲ? အဖြေကအများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့်…၂ ခုပဲအရင်ပြောမယ်။ ကြောက်အောင် နဲ့ ဒေါသထွက်အောင်။ အဲ့ဒီ ၂ ခုကတွဲနေတတ်တယ်။ လက်စားချေဖို့၊ အကြမ်းဖက်ဖို့၊ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့ ဆီကိုဦးတည်တယ်။အခုကမ္ဘာကြီးကအမှတ်ပေးဝန်းရံနေတဲ့ peaceful protest by the people of Myanmar ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ကောင်းကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ချင်တာပဲ။ အဲ့ဒါပျက်စီးသွားလို့မရဘူး။
အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲ? ခံစားချက်ကိုရှေ့တန်းမတင်ပဲ ဦးနှောက်နဲ့ပဲ ရှေ့ဆက်မယ်။နာစရာကိုနှလုံးသားမှာတက်တူးလိုထိုးထားမယ်။ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြမယ်။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ရှေ့တန်းနောက်တန်း ပိုစည်းလုံးမယ်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ်။ ” ဆိုပြီး ရေးသားပြောပြထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည်ကူးယူတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
ပရိတျသတျကွီးရေ အဆိုတျော ဖွူဖွူကြျောသိနျးကတော့ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ တဈသားတညျးရပျတညျပွီး လူထုလှုပျရှားမှုတှမှော တကျကွှစှာ ပူးပေါငျးပါဝငျနသေူတဈဦးလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှသေတငျးအခကျြအလကျတှကေိုလညျး အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီသိရှိနိုငျအောငျလညျး သူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှတဈဆငျ့ ဝမြှေ ပေးနတောလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ညစဉျ ၈ နာရီရောကျတိုငျးလညျး သူမရဲ့အိမျရှတှေ့ငျ သံဗုံးတီးလှုပျရှားမှုအစီအစဉျကိုလညျး လုပျဆောငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျ နာရီပိုငျးလောကျကလညျး ဖွူဖွူရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာတှငျ ခံစားခကျြကိုရှတေ့နျးမတငျဘဲဦးနှောကျနဲ့စဉျးစားပွီးရှဆေ့ကျတျောလှနျသငျ့ကွောငျး သုံးသပျပွောပွလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာကွီးကအမှတျပေးဝနျးရံပေးနတေဲ့ လကျရှိအခွအေနကေို အပကျြစီးမခံသငျ့ကွောငျးကိုလညျး အခုလို ရှငျးပွပေးထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ”
သတျတယျ။ဘာလို့သတျတာလဲ? အဖွကေအမြားကွီးပဲ။ ဒါပမေယျ့…၂ ခုပဲအရငျပွောမယျ။ ကွောကျအောငျ နဲ့ ဒေါသထှကျအောငျ။ အဲ့ဒီ ၂ ခုကတှဲနတေတျတယျ။ လကျစားခဖြေို့၊ အကွမျးဖကျဖို့၊ အဓိကရုဏျးဖွဈဖို့ ဆီကိုဦးတညျတယျ။အခုကမ်ဘာကွီးကအမှတျပေးဝနျးရံနတေဲ့ peaceful protest by the people of Myanmar ဆိုတဲ့ပုံရိပျကောငျးကိုပကျြစီးအောငျလုပျခငျြတာပဲ။ အဲ့ဒါပကျြစီးသှားလို့မရဘူး။
အဲ့တော့ဘာလုပျမလဲ? ခံစားခကျြကိုရှတေ့နျးမတငျပဲ ဦးနှောကျနဲ့ပဲ ရှဆေ့ကျမယျ။နာစရာကိုနှလုံးသားမှာတကျတူးလိုထိုးထားမယျ။ငွိမျးခမျြးစှာဆန်ဒပွမယျ။ ကိုယျ့အခငျြးခငျြး ရှတေ့နျးနောကျတနျး ပိုစညျးလုံးမယျ။ အရေးတျောပုံ အောငျရမယျ။ ” ဆိုပွီး ရေးသားပွောပွထားတာပဲ ဖွဈပွီး ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီသတငျးလေးကို တဈဆငျ့ ပွနျလညျကူးယူတငျဆကျပေးလိုကျရပါတယျနျော။